Ihe atụ 5 nke akwụkwọ akụkọ na otu esi emepụta ihe dị irè maka ụlọ ọrụ gị | ECommerce ozi ọma
José Ignacio | | eCommerce, StartUps na ndi oru itumgbere ahia
Ihe dị mkpa nke ihe a na-akpọ akwụkwọ akụkọ ka mebere gafere azụmaahịa ọdịnala wee rute azụmahịa kọmputa, ka ọ nwere ike bụrụ maka nke gị. Ọ bụ ihe gbasara a ala Ọ bụ akwụkwọ a na-ekesa mgbe niile, na-elekwasị anya n'otu isi isiokwu. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ akụkọ site na klọb, ọha mmadụ, mkpakọrịta, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ iji nye ndị otu ha ozi ma ọ bụ ndị ọrụ ha n'otu ogige.
Ihe ọ na-eme bụ na ọtụtụ mgbe ndị mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị na-enweta ụdị nkwukọrịta a bụ ndị debanyere aha ndị gosipụtarala mmasị na ika ahụ ma rịọ ka ha nata ozi site na mail. Na mgbakwunye, enweghị ike ichefu ya na ọ bụ akụkụ nke usoro ọhụụ ọhụụ iji gbalịa ijide ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ. Yabụ n'ụzọ dị otú a, ha dị ma ọ bụ na-anabatakarị ịre ahịa nke ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ ihe gị.
Ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ, a gharịrị iburu ya n'uche site na ugbu a na ọ bụghị ngwa ahịa ahịa. Ọ bụrụ na ọ bụghị, na ntụle, ọ na-dabere na eziokwu na n'ikpeazụ i nwere ike inwe emetụta ndị debanyere aha gị udiozi. Site na mmekọrịta chiri anya na usoro ndị ọzọ na azụmaahịa dijitalụ na nke ahụ nwere ike inye aka site n'oge ruo n'oge iji zụọ ngwaahịa gị n'ụzọ dị mma, nke nwere ọgụgụ isi na karịa ụzọ niile ziri ezi.
1 Akwụkwọ akụkọ: onyinye ha kachasị
2 Ihe atụ nke ụlọ ọrụ teknụzụ
3 Site na ụlọ ọrụ ọrụ
4 Ndị ụlọ ọrụ jikọtara ejiji na uwe
5 Ime nkewa miri emi
6 Jiri isiokwu mara mma ma dị egwu
Akwụkwọ akụkọ: onyinye ha kachasị
N'ezie, sistemụ a na-ewe ọtụtụ elele na azụmaahịa gị yana ọtụtụ karịa ka ị na-eche site na mbido. You chọrọ ịma ihe kachasị mkpa maka nkwupụta a? Ọfọn, obere ntakịrị anya na ị ga-amụta mkpa ndị akwụkwọ akụkọ ewere dị ka atụmatụ na ahịa dijitalụ na afọ ndị na-adịbeghị anya.
Ọ naghị achọ itinye ego buru ibu, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, na ntụle, ọ chọrọ nraranye na mkpebi siri ike iji mezuo akwụkwọ akụkọ a.
Ọ nọ na-akpụzi dịka otu n'ime ọwa kachasị mma ị nwere n'oge a ree ngwaahịa gị. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị nwere atụmatụ dị mma ị nwere ike ịnwekwu mgbanwe karịa na ọwa ndị ọzọ. Na ihe dị mkpa, na-enwe mmetụta dị ukwuu na ozi ị na-ezigara ndị debanyere aha gị.
Echefula na usoro nkwukọrịta a na-eme ndị debanyere aha gị ka a gwa gị nke akụkọ kachasị ọhụrụ na nkwalite nke akara gị. Karịsịa ma ọ bụrụ na ha metụtara mpaghara ebe ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmahịa gị n'ịntanetị jikọtara ọnụ.
Ọ dị ezigbo mkpa na ị tụlere na sistemụ a iji mepụta njikọ nwere ike bụrụ n'oge dị mkpirikpi otu n'ime isi mmalite okporo ụzọ gaa na weebụsaịtị ma ọ bụ blog gị. Ruo n'ókè nke ịkọ nnukwu uru maka ọdịmma azụmahịa gị.
Gini mere iji kwuo ya, o bukwa ihe di egwu maka ndị ahịa iguzosi ike n'ihe n'ụzọ dị irè karịa ka ọ dị na mbụ. Nke a bụ n'ihi na ọ na --emepụta njikọ nke isonye na usoro a nke usoro a na njedebe ndị ahịa na - arụkarị ọrụ karịa ka ọ dị na mbụ.
Ihe atụ nke ụlọ ọrụ teknụzụ
Otu n'ime ihe ịrịba ama na usoro a dị oke irè na-anọchi anya ụlọ ọrụ ndị ejikọtara na teknụzụ ọhụrụ. Si ebe i nwere gwara onye ọrụ ahụ nke akụkọ kachasị ọhụrụ ewepụtara, ma ọ bụ site na mpaghara ma ọ bụ site na ụlọ ọrụ n'onwe ya. Site na ebe o bara nnukwu uru i puta udiri akwukwo a nke ihe omuma. Maka ọtụtụ ihe anyị ga-akọwa n'okpuru:
Ọ na - eme ka ụlọ ọrụ dị mma karịa ka ọ dị n’ihe banyere azụmaahịa jikọtara na teknụzụ ọhụụ.
Ọ bụ ụzọ kachasị mma iji gwa ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ nke akụkọ sitere na mpaghara ahụ n'onwe ya.
Ọ bụ ezigbo nkwado iji weta atụmatụ ndị anyị na-emepe n'oge ọ bụla na ọnọdụ ọ bụla, ọbụlagodi iji gwa ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ nke onwe ya.
Ọ bụ usoro nke kwekọrọ na usoro ọhụrụ na ụzọ ịbịaru azụmahịa. Na-eme ihe ike ike na-eru nso karịa ndị na-ahụkarị ruo afọ ole na ole gara aga.
Enwere ike iji nkwado dị iche iche, ma akwụkwọ edemede na ihe ọdịyo na akụrụngwa, dabere na uru a ga-enye maka akwụkwọ akụkọ azụmaahịa na nkwalite ndị a.
Site na ụlọ ọrụ ọrụ
Nke a bụ akụkụ ọzọ nke nnukwu azụmaahịa ebe akwụkwọ akụkọ dị ugbu a n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Ruo na ọ bụ akụkụ nke usoro ịzụ ahịa ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ isiokwu. N'okpuru ụdị ụzọ ọ bụla ma ọ bụ atụmatụ dị na ahịa dijitalụ. N'ebe dị elu karịa akụkụ ndị ọzọ nke azụmaahịa gburugburu ụwa na n'ezie na Spain.
Mgbe i kwuchara onyinye niile nke ngwaahịa gị, igbe ederede na-egosi ebe edepụtara ọnọdụ nke nkwalite ahụ, n'ụzọ doro anya. A na-etinyekarị ihe ndị a na njedebe ozi, na obere ebipụta na na agba na-adịghị apụ apụ nke ukwuu.
N'ụzọ megidere nke ahụ, ndị sitere na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ekpebiela itinye ya na ebe a na-ahụ anya na usoro, na-ebunye ndị ahịa ha ihe ngosi nke ntụkwasị obi na ntụkwasị obi.
Ebumnuche nke akwụkwọ akụkọ ahụ dịkwa oke mma ma dịkwa na ndị na-ege ntị, ezinụlọ. Otutu Kpọọ ime ihe (CTA) na usoro ojiji nke agba iji dọta ndị na-agụ akwụkwọ na-enyere aka na nkwukọrịta.
N'aka nke ọzọ, enweghị ike ichefu na na nke a kpọmkwem, ihe ikpeazụ na nnukwu ihe iji gosipụta bụ na ala nke akwụkwọ ozi ahụ, ebe a na-achọta ụdị niile nke ịkwụ ụgwọ na akara ntụkwasị obi n'ịntanetị. Nke ahụ bụ, ị na - eme ka ntụkwasị obi ka ukwuu na akụkụ ọzọ nke usoro ahụ yana nke ahụ dị ezigbo mkpa ka ị too n'ime ụlọ ahịa gị ma ọ bụ azụmaahịa ịntanetị. N'ezie, itinye ya n'ọrụ agaghị emechu gị ihu n'oge ọ bụla ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla.
Ndị ụlọ ọrụ jikọtara ejiji na uwe
O doro anya na ọ bụ akụkụ ọzọ na azụmaahịa dijitalụ ebe atụmatụ a ekwesịghị ịdị na-ere ahịa nke oge a. N'ihi na n'eziokwu, na nke a, n'ezie, ọ nwere ike ịnwe ọtụtụ ihe ọhụụ, dịka na ihe atụ ndị a anyị ga-egosi gị:
Ihe onyonyo a ma ama nke na-enye aro ma na-adọta uche ndị nnata nke akwụkwọ akụkọ a pụrụ iche.
Ederede ederede ma ọ bụ onyonyo ederede iji mejuputa ozi ahụ na ọtụtụ akụ na karịa arụmọrụ niile.
Ma n'ezie, ịgaghị ịhapụ oge a ziri ezi ihe bụ bọtịnụ ịzụta ma ọ bụ ịkpọ oku iji gbaa ngwaahịa ndị ị na-enye ume n'oge niile.
Ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ, ọ bụkwa eziokwu na na mbido anyị na-ahụ akara akara ahụ na obere menu nke njikọ, mana ọzọ anyị na-ahụ atụmatụ dị mfe nke akwụkwọ akụkọ ndị a, na n'ezie na ọ bụghị n'ihi enweghị akara akụrụngwa. . Ọ bụrụ na ọ bụghị, na ntụle, nke a bụ naanị n'ihi na ọ bụ n'ezie irè format. Mepụta email mgbasa ozi dịka nke a dị mfe iji ụfọdụ ndị editọ yana ọkachasị nsonaazụ na-atọ ụtọ maka ọdịmma azụmahịa gị site ugbu a.
Ime nkewa miri emi
N'ime ahia email kpọmkwem, nkewa na-ezo aka na categorization nke ndepụta data gị n'ìgwè dị iche iche dabere na ozi ị nakọtara ma ọ bụ nke ị na-achịkọta site na ndị debanyere aha (mmekọahụ, afọ, ọnọdụ obodo, ọdịmma, omume…) na ebumnuche nke ịnye ha "ọdịnaya ederede.
Agbanyeghị na ị nwere ike ree otu ngwaahịa ma ọ bụ aka ọrụ, ndị ahịa gị / ndị debanyere aha agaghị enwe otu njirimara oge niile, yabụ ịnye ha otu ọdịnaya ga-enwe obere ohere ịga nke ọma karịa ịnyefe otu dabara na njirimara na mkpa ha. .
Nke a bụ usoro azụmaahịa dijitalụ nke ụlọ ọrụ na-ere ngwaahịa jikọtara ya na ọdịbendị (akwukwo, odiyo, vidiyo, nkwado ihe omuma, wdg), site na ebe ha choro uzo di iche na ndi ozo. Na ọdịiche dị iche na ọdịnaya ihe ọmụma ka ị nwee ike ịhazigharị na ozi nke akwụkwọ akụkọ a site ugbu a.
Jiri isiokwu mara mma ma dị egwu
Okwu a dị oke mkpa n'ihi na ọ na-emetụta ọnụego emeghe, ọ bụ nzọụkwụ mbụ iji dọta uche nke nnata ma gbaa ha ume ịgụ ọdịnaya anyị nyefere. Ọ dị ezigbo mkpa iwepụta oge na isiokwu dị mma, tụgharịa uche dị iche iche dị iche iche, họrọ nke dabara adaba, ma jiri ụdị ule niile lelee ịdị irè ha. Nke a bụ sistemu enweghị ewepu enwere ike itinye ya n'ọtụtụ usoro azụmaahịa yana nsonaazụ dị mma site na mmalite.
Karịsịa n'ihi na ndị natara ozi ndị a pụrụ iche na-anabata ha nke ọma. Site na echiche a enweghi obi abụọ na ọ nwere ike ịdị irè karịa ndị ọzọ ekpughere. Na uru nke ha dị mfe iji mejuputa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ihe atụ 5 nke akwụkwọ akụkọ na otu esi emepụta ihe dị irè maka ụlọ ọrụ gị
You na-enyere ecommerce? Ihe kacha mkpa